I-Promark 3 GPS, umbono wokuqala-iGeofumadas
Ikhaya/GPS / Izixhobo/I-GPS Promark 3, uluvo lokuqala
Ndisususile le miboniso ebhokisini, ngaphakathi kwiveki enye sizokwenza uqeqesho ukubona ukuba lusebenza njani. Okwangoku, andiziboni iividiyo kunye nezinye zeempawu zabo.
Abadala be-Promark 3.
Kulo mgca, ngaphambili kwakukho kwaye kukho ukugqibela:
I-Mobile Mapper Pro, into yokudlala emnandi eya kwi-US $ 1,500, kwaye emva kokuqhubekeka kuphunyezwe ngokuchanekileyo kwemowudi. Isenokuba sisiseko kunye ne rover. Kungokunje iphelisiwe; Kwakucaphukisa ukuba ikhadi lacwangciswa ekuqaleni, mhlawumbi ngenxa yentsholongwane, mhlawumbi ngenxa yempazamo emva koqhankqalazo lwabasebenzi benkampani.
I-Mobile Mapper CX, Olu luhlobo oluphuculweyo lwePro, nge-eriyali inokusetyenziswa njengeGeodetic GPS. Wayenesihlobo esigama u-CE, esasibaleka kwiWindows CE, kwaye kwinto endiyivileyo, le CX ayinazintloko zentloko zalowo.
I-6 Mobile Mapper, lo ngumgca omtsha, Ndiye ndathetha ngezi zihlandlo eziliqela. Okungakumbi okanye okuncinci kulingana ne Juno I-Trimble, nangona iyigqitha ngokuchanekileyo. Ayinakuba sisiseko, i-rover kuphela kwaye ngexesha lokwenyani ngumqhubi we-fucking kunye nokuchaneka kweemitha ezi-3 ukuya kwezi-5.
Yintoni entsha kwi-PM3
Oku kuzisa efanayo umsebenzi ukuya Pro kunye CX, ngokungafaniyo 6 aveza Mobile Mapping, ikhamera, ikhampasi kunye pickets. Kulabo bazama iPro, kulula kakhulu kuba indlela yokusebenza iyafana, yenza lula amanqanaba amaninzi kwimenyu, eyongeze ikhibhodi kunye nekhenkco yokuthintela yenza kube ngakumbi. Uncedisa ukufumana kunye ne RTK ngaphandle, Andiqinisekanga ukuba isekela ezinye izicelo, ezifana ne-ArcPad, leyo i-MM6 enokuyenza. Ngokuqinisekileyo, ubuchule beprogram esilethayo (i-Survey Fast) ayifani ngokuthelekisa ne-Mapping Mapping, ngokwemigaqo yokucwangciswa, ukubonakala kwamaphuzu kunye nezinye iintloko zaso.
NjengePro, inokuba sisiseko okanye i-rover, ithengwe ngababini, kwaye ingene kwingxowa ye-duffel esebenzayo. Inye nganye ibandakanya i-eriyali, ngexesha lokwenyani ifumana ukuchaneka kwe-submetric (into eyenziwe yiprosesa emva kokuqhutywa). Ukushiya isiseko esinye kunokunika ukucaciswa kwesentimitha, nazo ezi nkcukacha zedatha ziya kwenza ukuba i-MM6 ifikelele kwi-metric njengoko kubonisiwe kumthambo yangaphambili.
Phakathi kwezinto ezincedisayo kukho iadaptha yokuyibeka kwi-tripod, enye yokuyixhasa kwipali kunye nomtya wokuyilungisa esandleni; Iteyiphu yokulinganisa ukuphakama kwe-eriyali, iadaptha yeendlela ezahlukeneyo zokunxibelelana kwe-USB / Uthotho. Phakathi kwezinye izinto, intambo ye-eriyali, iadaptha ezahlukeneyo zamandla, ikhadi le-SD kunye nengxowa yomntu engangeni manzi.
Ibhetri yi-lithium, kunye neeyure ezininzi zobude bexesha, egqitha abo bangaphambili ababesebenzisa i-AA; ekuthengweni kwezi zimbini kuza ibha eluncedo ukuyibeka phantsi kweemeko ezifanayo xa usebenza ngendlela "yokumisa nokuhamba". Bazisa isoftware yokwenza iOfisi yeMephu yeOfisi emva kokuqhubekeka, inguqulelo 3.4 esele ixhasa idatha ye-raster, ukusebenzisana nedatha yeMapinfo, shp, dxf kunye ne-csv; Kwakhona esinye isicelo sedesktop esaziwa njengezisombululo ze-GNSS, ezibandakanya ukucwangciswa kophando. Esi sicelo sokugqibela sinombhalo ophathekayo osebenzayo, kunye nokudonsa kunye nokulahla ukhetho, iingxelo kunye nokubonisa kwe-isometric.
Enye yezona zinto zilungileyo, iDVD eneevidiyo ngeSpanish, ngokuyibukela ungagcina ukufunda okuninzi kwaye uqonde ukuba isebenza njani ngendlela esebenzayo; nangona incwadana iluncedo nayo. Ividiyo ilungele uqeqesho, kubandakanya necandelo elichaza ukuba isebenza njani amaqela e-satellite kunye nezinto ezichaphazela ulwamkelo. Ikwabandakanya izihloko:
Intshayelelo ekusebenziseni i-GPS
Unokwenza njani ukuphakamisa okukodwa
"Yeka uhambe" uphononongo kunye nezicatshulwa
Iprojekthi yeshenyuli yasensimini
Ukusetyenziswa kweMfono iMapper Office kunye nezinye iisofthiwe zeofisi
Ukuthathwa nokuphathwa kwedatha ye-GIS
Kwamaxabiso kuxhomekeke kumboneleli lasekuhlaleni, ngoko Ndafuna iqhinga kwimeko yam, i Pro Mobile Mapper wahamba i-US $ 1,500, i MM6 uhamba ngaphakathi 1,200 and Promark3 kufuphi $ 6,000 ididi. Akukubi ukuba ucinga ukuba ukuchaneka kwesentimitha kunokufezekiswa, ezinye iimveliso aziboneleli ngezixhobo ezinje ngeli xabiso.
Ukuba bekufuneka ndiyithelekise kunye namanye amaqela, kunokuthiwa yinto efana nayo Ukuqhawula iGoXX, nangona bengalingani.
Siya kwenza ikhosi kule mpelaveki nabafana abasuka kwisikhululo esipheleleyo kunye nabahlobo abathile abanomdla wokufunda simahla. Sinomdla wokuvavanya ezinye izinto ezinje:
Accuracies ukuba phantsi kweemeko ezifanayo kunye nezixhobo ezikhoyo koomasipala: MMPRO kunye MM6, xa kuthelekiswa ne-ababini Promark3 RTK.
Kukuphi ukuchaneka okunokufezekiswa ngexesha lokwenyani kwaye kuya kusebenza njani ukuqhuba iGarmin Legend phantsi kweemeko ezifanayo kwiipropathi ezinkulu kuneehektare ezi-3.
Yikuphi ukulahleka kokuchaneka kukho kwimida: i-100 yamitha, enye, ezintathu kunye neekhilomitha ze-6.
Kwangelo xesha, siya kuthi sonke sizame iimitha zomgama ngokoluvo lwam ezinokuthi zithathe indawo yeekhampasi zaseSuunto ukuba zinxantathu ngokwaneleyo, kwiindawo ezisezidolophini. Ngokusekwe kuvavanyo siza kuthatha isigqibo sokuyandisa imizamo yethu kuvavanyo lwasemaphandleni oluza kusithatha ukusuka kuJuni ukuya kuSeptemba.
Siza kubona indlela ehamba ngayo.
I-XHOUMX 3 e-intanethi nje yokusebenza, uya kuyika ukubona i-mudança de satellites.
Ho bisogno di un promark3 isilawuli con fastsurvey e survCE nge winCE 4.0 ripomax yahoo.it paypal pay enkosi URGENT ngenqanawe ukuya italy
kwaye c uthi:
Molo, ndinePromark 3 Magellan kwaye ndihlala eMedellin, eColombia; Ndingasigcina kwaye ndihlaziye phi isixhobo?
okanye ndidibana naye ukuba ndiyithumele kwelinye ilizwe kuba ndisebenza neqela kwaye ndiyidinga ngokukhawuleza
Ndiza kulinda impendulo yakho
Ndingathanda ukwazi ukuba ndibonakala njani umfanekiso kwiskrini se-GPS ukubeka i-3 magellan kwindawo yokulawula
URICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ uthi:
NDIFUNA UKWAZI UKUBA UKUQINISELWA KWEENKQUBO NOKUBHALA, NOKUBHALA KANYE NOKUBHALA KWEZINDAWO ZAMAGELLAN KWI-WINDOWS 8.1
I Kufuneka ndazi ntoni ukuba ungalayisha ezantsi IINGONGOMA Windows 8 GPS kunye ukuqwalasela uRobert BASE UNGAFANI UMNTU angandinceda PLEASE
Ndine 220 promgs gps oku kusetyenziswe kwakhona kwaye ngoku xa ndiyijika kuyo ayidluli phambili kwesikrini sokuqala njengoko ndinokuyenza
JUAN MANUEL CAMACHO ARMENTA uthi:
Ndiyakhathalela kwisixhobo kule miqathango kodwa kubalulekile ukuba ube nolwazi oluninzi njengemiyalelo, kodwa kunye nekhosi encinane abayinike yona, ndifuna ukwazi ukuba kuninzi kangakanani iindleko, ezitsha okanye zangaphambili. Ndiyabonga kwangaphambili le ngcaciso.
walter amezquita uthi:
Sawubona, ndingathanda ukwazi ngakumbi malunga nezixhobo zakho, ukuba ungayisebenzisa njani, iinzuzo kunye nokuba unokufumana ezinye iimifanekiso zezixhobo zakho kunye nexabiso.
NDINGITHINISA I-PROMARK I-3 EQUIPMENT USED. UKUBA UTHIXA NOKUBA UFUNA UKUQEQESHWA NGOKUSEBENZISWA KWAKHO, KUBAFUNA. I-PRICE YOKUVUMELANA. NDIHLOLWA KWI-COLOMBIA. imeyile: fotopacho1hora@yahoo.es
Unokwenza oko kunye nomthengisi we-Topcon / Magellan kwilizwe lakho.
Ndicetyiswa ukuba ungcono ukuya kwi-Mobile Mapper 100 okanye into enjalo kuba u-Promark3 ululathiso olungenaso ikamva elivela kuMagellan.
abraham brown barahona uthi:
unomdla kwixesha elizayo lokuthenga i-gps ngokutsha3 rtk kunye nazo zonke izixhobo zayo zibulela.
URobinson Vargas uthi:
Molo, ndinesibini se-PMK3 (iinyanga ezisibhozo zokusebenzisa) ngezixhobo, isoftware kunye noqeqesho. NdiseBucaramanga (Sder-Col) exabisa i-8'11 (iiPasos zaseColombia).
jc zemernots uthi:
Ndinegunya le-3 kwaye ndibiwe i-antenna, i-baton kunye neetambo, ndingathanda ukucaphula la makhonkco ukuba bakwazi ukuzithenga kuba kubaluleke kakhulu kum msebenzi wam. mbulela
Asisasazisi izixhobo okanye izixhobo.
Eyona nto ingcono kukuba ucaphula kunye nomthengisi welizwe lakho. Maxa wambi siye sanxibelelana nomthengisi, kumazwe apho kungekho msasazi okanye engasebenziyo, njengakwimeko yaseColombia. Kodwa kuye kwaba kwiimeko ezikhethekileyo.
emva kwemini, unokuthi ndicaphule ikhetheni le-antenna malunga nezixhobo ze-3
umqobo we-adalberto uthi:
Ndingafumana phi iDVD ngevidiyo kwiSpeyin ekusebenziseni i-3 intsha, ungayithengisa yona ndiyabulela kakhulu ukuba ndiyakuxabisa ulwazi lwakho olufikelela kwi-adalberto barrier castan
Ndicinga ukuba akukho msasazi we-Ashtech eColombia. Kuya kufuneka ufumane umthengisi okufutshane, mhlawumbi iPanama okanye iVenezuela.
I-Promark 3 liqela eliya kugqitywa, ngoko ndikucebisa ukuba ujonge iinketho ezintsha ezifana ne-Promark 100 okanye i-Mobile Mapper 100
indlu yefabi uthi:
Ndifuna ukwazi ixabiso le-promx3 NdingumKolombia kwaye ndinika yona
Into elula kukuba uyicaphula ngumphathi wakho waseThales wendawo
FERNANDO LOPEZ LOZADA uthi:
NDIFUNA ICAWUTE YEGPS ANTENNA BRAND PROMARK3 THALES COLOMBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NDIFUNA ICAPHULO SE-ANTENNA YEGPS BRAND PROMARK3 THALES COLOMBIA
I-Ashtech Ifowuni yeeMephu 200
Hi .. Ndingathanda ukwazi oko GPS (trimble-asttech) ndinicebisa umlinganiselo umhlaba ngokucokisekileyo ngakumbi, mna ndihlala mphandle Colombia kaThixo ziingqikelelo, kukho imithi emininzi kangaka ulwamkelo yesathelayithi akuyona indlela engcono, kodwa ndifuna ukwenza le liphakamisa nge kwimithana GPS i iziphumo ngokungathi ilinganiswa isikhululo iyonke (kukuba nokuchaneka yahluka ukusuka kwiinkalo ezininzi bangaze ukuchana GPS iya kulingana naleyo zesikhululo, kodwa ndingathanda ukwazi oko sisondela, yintoni isoloko ichanile kakhulu, ngenxa
Andinalo isifundo kwizinto ohlala kuzo.
Kodwa xa uthengisa ezo zixhobo, kukho ezinye iividiyo ezichazayo zezinto eziphambili.
JUAN JIMENEZ uthi:
Ndingathanda ukufumana izixhobo ezimbalwa zePromark 3, ukusebenza kweRTK, isoftware kunye nazo zonke izincedisi, ukuba unesifundo sokufunda ukuba isebenza njani. Indlela yokuhlawula. NdiseVenezuela.
UJuan Alejandro Garzon Pitta uthi:
Ndiyabulisa, ndifuna ukuthenga i-GPS enye ye-Promark 3 Thales, uhlobo lwe-L1, ndingathanda ukwazi ixabiso, kuphela i-GPS efunekayo, ezinye izinto azikho. Ndingayivuyela intsebenziswano yenu.
Ewe, kunzima ukwazi, into ekhuselekileyo kukuba intambo yonakaliswe kwindawo apho idibanisa khona, yingakho ilahlekelwa ngumqondiso njengoko isetyenziswa. Babuthathaka kakhulu.
Ngokukodwa, andizange ndifumane i-Stop and Go mode ebonakalayo, ngenxa yokuba uphawu lulahleka lula kwiindawo ezinemiqobo okanye indawo engafanelekanga.
Molo, njengombuzo, ndiza kufuna ukwazi ukuba kutheni i-promark ye-3 isetyenziswa xa uyisebenzisa kwaye usenza zombini uphando lwe-kinematic kwaye umise kwaye uhambe, uyandilumkisa "ngekhonkco elilahlekileyo" kunye "nonxibelelwano lwe-antenna yangaphandle alunakubhaliswa" okanye into efana nale. ukuba . Ngalo lonke ixesha oku kusenzeka xa kukhutshelwa idatha kwiPC yam, amanqaku agxothwa kakhulu ngokubhekiselele kwezo ziphandwe. Enkosi! evela eArgentina
Unokuqokelela idatha ngenye kuphela, emva koko kunye neNkqubo yePostprocessing (i-Mobbile Mapper Office) wenza ukuthunyelwa emva kwe-database ye-Rinnex ekhoyo kwi-Intanethi. Ubunzima bunokuba kukuba awufumani ziseko ezikufutshane kakhulu kwindawo yakho yokuphakamisa.
alvaro graham uthi:
Ndiyabulisa ngoku ndine promark3 kwaye ndifuna ukwazi ukuba ndingalenza na iTopographical survey ngento enye nje ndiyazi ukuba ingenziwa njengemaphu ebandayo kodwa ayindiniki ukuphakama. Ifuna ukuchaneka kwaye ndifuna ukuyenza kwi-post-processing. Ndingavuya ukuba ungandixelela ukuba njani. Ndingayenza enkosi alvaro graham
Ukuba bafuna isibonelelo, kufuneka bashiye ilizwe apho bahlala kuyo.
URonal Zamora Sevilla uthi:
Ndifuna ukwazi ukuba ungangifumana ikhefu le-antenna yangaphandle yeprogram ye-mapper yeselula kunye nokuba ungakanani
pe inokucaphula iProMark3 kwaye inike ikhathalogu
i-imeyile kaRoger Hernandez ibe yintoni? shiya uphawu oluthile ukuze ubone oko kwenziwa ngekhebula lakho le-antenna
Imibuliso… .Ndingayifumana njani isoftware yovavanyo FAST ngeSpanish? Ndilinde izikhombisi kwiposi yam ... enkosi
Saw, ndithumele isicelo sakho kunye ne-imeyile kummeleli waseMagellan ukuze adibanise nawe.
Molo ngale veki ndingathanda ukuba ucaphule kum izixhobo ezimbalwa zegps, ukuze uzithenge ngokukhawuleza okukhulu…. …. enkosi
Ewe, senze kakuhle kakhulu, ndifuna ukuthatha ixesha lokubhala iziphumo. Ngaphandle kokubhalwa kweempazamo eziqhelekileyo ekusetyenzisweni kwezi zixhobo.
Kwaye kwenzeka njani? : -S
Sawubona uLuis, kweliphi ilizwe olaphayo, ukwazi ukuba ngubani umthumi wokuthumela.
Ndifuna ukuthenga izixhobo ezipheleleyo uthi:
Nceda uphawule ngokukhawuleza
Ndathumela i-imeyile kumntu onokunika inkxaso kwiColombia, ecinga ukuba kubonakala ukuba umthubi wamanje kweli lizwe akafumanekanga.
UROGER HERNANDEZ uthi:
MHOLO. NCEDA NDITHANDA UKUCACWA IKHABHULA YE-ANTENNA YEGPS PROMARK 3 THALES KWAYE KUTHATHA IXESHA ELIngakanani UKUFIKELELA EBOGOTA-COLOMBIA
NDIQHELELA UKUNIKELWA KWENKCAZO.
MFUNEKA NDIFUNELE UKUQALA.
Yenza ibhokisi elithwalayo nge-AutoCAD Civil 3D